I-Ceramic injection yokwenza i-zirconia ukubeka iphini China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ubunjiniyela beCeramic Component > I-Structural Ceramic Component > I-Ceramic injection yokwenza i-zirconia ukubeka iphini
I-Ceramic injection yokwenza i-zirconia ukubeka iphini
I-Model No.: JH.SC.008
Yenziwe yi-yttria tetragonal zirconia polycrystal enezinguquko ezinomphefumulo (3Y-TZP). Esikhathini esivamile, sisebenzisa ukwenziwa komjovo we-ceramic ukwakha lolu hlobo lwephini elihle le-ceramic, kulula ukuthola izingxenye ze-ceramic ezicacile.
Ngezinye izikhathi, kudingeka ukubekezelelana okungcono ukuhlangabezana nesicelo esenziwe ngezifiso ukuze inqubo yesibili izokwenziwa, njengokugaya, ukusika, ukupholisa, bese uthola incazelo yokugcina.
I-3Y-TZP pin ye-ceramic inempahla eminingi evelele, njengobuningi obukhulu ngokweqile, amandla angaphezu kwamandla amaningi, ukumelana okunamandla okukhulu nokuqina okukhulu, ukushaqeka okufudumele.
Siyakwazi ukukhiqiza i-pin ye-ceramic, ukufakwa kwe-ceramic ngomdwebo wamakhasimende, noma amasampula anekhono lethu lokuklama amandla. Kungakhathaliseki ukuthi kukhonjiswa noma ukukhiqizwa kwenqwaba yezindleko, sizobe sesikusiza ekuphumeni kahle.
I-Special Color Alumina Ceramic disc for pump pump
I-Disc Ceramic Disc yeCeramic Cartridge
I-Disc Yokulondoloza I-Alumina Ceramic Valve Yokugqoka Engokwezifiso
I-Standard Ceramic Seal & Disc ye-Ceramic Stems
I-High Precision Zirconia Pin
I-3Y TZP i-Zirconia Pin
I-Zirconia Faka i-Ceramic Inserable
I-High Precision Zirconia Umbukiso we-Ceramic